Qabiinsi mirga namoomaa manneen sirreessaa fooyya’uu sirreefamtoonni himan – Fana Broadcasting Corporate
Finfinnee, Sadaasa 2, 2012 (FBC) – Qabiinsi mirga namoomaa manneen sirreessaa fooyya’uu sirreefamtoonni Bulchiinsa Manneen sirreessaa Komishinni Feedeeraalaa mana sirreessaa Shawaa Roobiittitti argaman ibsaniiru.
Sarbamni mirga namoomaa sirreeffamtootaa Ityoophiyaa keessa ture jijjiirrama as fooyya’uu isaa dubbataniiru.
Sirreefamtoonni kunneen haala yeroo ilaalchisee yaada kennaniin dargaggoonni dhimmoota jeequmsaaf nama kakaasan irraa of qusachuu akka qaban dhaamaniiru.
Carraa gaarii akka biyyaatti uumame fayyadamuun jijjiirrama hawaasa fayyaduuf gahee isaanii gummaachuu akka qaban ergaa dabarsaniiru.
Mana sirreessaa kana keessatti leenjiin ogummaa fi barumsi idilee kutaa 1-8ffatti sirraaffamtootaaf kennamaa jiraachuu ibsameera.
Gama biraan sirreeffamtoonni kunneen fedhii bu’araa tokko tokko irratti hanqinni jiraachuu komii ni dhiyeessu.
Dhimma kana ilaalchisee hoogganaa mana sirreessichaa kan ta’an Komaandar Indashaaw Maammuu yaada laataniin, komiin sirreeffamtoota biraa ka’e sirrii ta’uu himuun,hanqinicha furuuf hojjetamaa jira jedhan.
Qabiinsa mirga namoomaa sirreeffamtootaa ilaalchisee qajeelfama mootummaan diriirseeen akka mana sirreessaa Shawaa Roobiittiitti hojii baayyeen hojjetamuu dubbataniiru.
Hawaasnis sirreeffamtoonni yeroo gara hawaasaatti deebi’een simannaa gaarii fi ogummaa argatanii bahaniin akka tajaajilaaniif deeggarsa gochuu qabu jechuun ergaa dhaamaniiru jedha ragaan Abbaa Alangaa Waliigala argame.
Duudhaalee guddisuu fi dhalootaf beeksisuun bu’aa qaba- hayyoota
Qorannoon addaa dhaabbilee mootummaa fi dhuunfaa irratti taasiifamaa ture ifoome
Dooktar Abiy Ahimad gitasaanii Noorweey Eernaa Soolbarg waliin mari’atan
Meeshaan Kontiroobaandii fi Doolaarri Ameerikaa Birrii miiliyoona 7.7tti tilmaamamu…
Barsiisoonni Keeniyaa qabeenya isaanii akka ifoomsaan…
Xiyyaarri Chiilii namoota 38 qabattee balali’aa turte…
MM Dr Abiy, badhaasa Noobeelii Nageenyaa fudhatan
Tuurk lammiilee Farnsaay miseensa IS ta’uun shakkite 11…